Gadra nitsoaka : Karohina fatratra i Lalao Adeline Aimé -
AccueilRaharaham-pirenenaGadra nitsoaka : Karohina fatratra i Lalao Adeline Aimé
13/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vehivavy iray 41 taona antsoina hoe Lalao Adeline Aimé, gadra nitsoaka teny amin’ny fonjan’i Manjakandriana no hifampitadiavan’ny mpitandro filaminana fatratra amin’izao fotoana izao. Namoahana taratasy fampikarohana, izay naparitaka eny amin’ny biraon’ny manam-pahefana mihitsy ity voafonja ity, taorian’ny nahazoana fitoriana mahakasika azy indray. Araka ny fanazavana nentin’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, dia betsaka ny olona nitory azy noho ny resaka asa ratsy maro isan-karazany, saingy ny fitarainana voarain’ny polisy farany noho ny resaka fisolokiana avo lenta nataony no isan’ny hanenjehana, ary namoahana io didy fampikarohana ity voafonja efa voasokajy ao anatin’ireo jiolahy ikoizana ity. “Nisy trano mitentina manodidina ny 72 tapitrisa Ariary efa lafony, ary namidiny fanindroany indray, ka izay no anton’ny nitorian’ilay mpividy voalohany azy farany teo”, hoy ny fanampim-panazavana. Araka ny voalaza ihany koa, dia fantatra fa zanaka jeneraly ity voafonja nitsoaka ity, ary niditra am-ponja iray volana monja, ny taona 2017 ny tenany, izao tafavoaka ary tsy hita popoka izao.
Kalaza amin’ny herisetra sy vono
Ankoatra ny resaka fisolokiana sy ny asa ratsy hafa izay efa vitany, dia fantatra ihany koa fa isan’ny havanana ary tompon’ny herisetra i Lalao Adéline Aimé. Araka ny fanadihadiana natao mantsy, dia fantatra fa efa nisy havany nodidiany tamin’ny antsy, ankoatra ireo maro tsy ho voatanisa. Fantatra ihany koa fa malaza amin’ny resaka fandrahonana maro isan-karazany, ny vono sy ny ratra ity vehivavy tafatsoaka ny fonjan’i Manjakandriana ity. Noho ireo antony rehetra ireo no hikarohana azy fatratra, satria dia fototry ny tsy fandriam-pahalemana izao fanjavonany izao. Mandry andriran’antsy avokoa ny olona rehetra mifanerasera aminy, raha mbola mirenireny sy mihaodihaody eny anivon’ny fiarahamonina eny ny tenany. Raha tsiahivina, dia voafonja tsy latsaky ny 18 izany izao no hifampitadiavan’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany ireo gadra nandositra tany amin’ny fonjan’Ambatondrazaka sy ny fonjan’Ankazobe, ary ny fonjan’i Tsiafahy izay vaky ny taona 2017. Manampy azy ireo miaraka amin’ity vehivavy ity kosa ireo telolahy vao nandositra ny fonjan’Antanimora ny sabotsy alina lasa teo.